बहुुउपयोगी सपिङ अनलाइनको थालनी
काठमाण्डौ । व्यापार व्यवसायलाई पूर्णरुपमा अनलाइन र अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले एसएनबी सपिङ डटकमको थालनी भएको छ । शहरमा उपलब्ध हुने सबै किसिमको सामाग्रीदेखि कृषिजन्य उत्पादनहरु समेत यस अनलाईनमार्फत बिक्री गर्न सकिने जनाइएको छ । विश्वमा मानिसहरु जति व्यस्त हुदै जान्छन, अनलाईन व्यापार पनि फस्टाउँदै गएको थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।...
काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आएका एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक(AIIB) अध्यक्ष जीन लिक्वुनले शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी र प्रबुद्ध परिषदका सदस्यहरुसँग भेटवार्ता गरे । राजधानीस्थित सोल्टी होटलमा भएको भेटवार्ता नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी बैंकको सहयोग परिचालनका विषयमा केन्द्रित थियो...
काठमाण्डौ । पशुपति पेन्ट्सले दशैँ तिहारको अवसरमा आयोजना गरेको ‘पशुपति पेन्ट्स महापर्वको रङ्गोत्सव’ योजनाको विजेताको घोषणा गरेको छ । कम्पनीको बबरमहलस्थित आफ्नै प्राङ्गणमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विजेताको छनोट गरिएको हो । विजेता छनोटका लागि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक महेशकुमार मुरारकाले योजनाका...
५६ हजार पैसा पठाउँदा काठमाण्डौमा घडेरी !
काठमाण्डौ । विदेशमा दुःख गरी कमाएको ५६ हजार रुपैयाँ घरमा पठाउँदा त्यसबाट लाखौं रुपैयाँको घडेरी काठमाण्डौमा पाइएला भनेर तपाईं सोच्नुुहुन्छ ? सिटी एक्सप्रेसको प्रवद्र्धनात्मक अफरको विज्ञापन सुन्दा कसै कसैले कल्पना गर्नुभएको थियो होला । तर, सोचेर वा कल्पना गरेर मात्रै यस्ता अफर पाइँदैन, भाग्य चाहिन्छ । हो, यस्तै भाग्यमानी बन्न सफल भएका...
शिवरात्रिमा टेलिकमको अफर, ७५ रुपैयाँमा २ सय एमबी डेटा
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले नेपालीहरुको पवित्र चाड शिवरात्रीको अवसरमा पर्व अफर सार्वजनिक गरेको छ । यस अफरमा डेटा बण्डल प्याकेज अन्तर्गत रु. ७५ मा एकसय एमबी डेटा र बोनसको रुपमा १ सय एमबी नै यूट्यूब डेटा प्याक उपलब्ध हुने बताइएको छ । एकपटक लिइएको डेटा १५ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ । यस्तै, टेलिकमले रु.१५० मा २ सय एमबी डेटा र बोनसको रुपमा...
सुरु भयो छालाजुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनी, २५ प्रतिशतसम्म छुट पाइने
काठमाण्डौ । ‘कला र कौशल हाम्रो, नेपाली ब्राण्ड’ नै राम्रो भन्ने मूल नाराका साथ राजधानीको भृकुटी मण्डपमा बुधबारदेखि राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनीको छैठौं संस्करण सुरु भएको छ । यो प्रदर्शनीको आयोजना नेपाल छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघले गरेको हो । बुधबार एक समारोहका बीच प्रदर्शनीको समुद्घाटन उद्योग र�...
प्रयास नेपाललाई हिमालय एयरलाइन्सको सहयोग
काठमाण्डौ । नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालय एअरलाईन्सले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको शुरुवाती पहलको रुपमा बालुवाटारस्थित प्रयास नेपालका बालबच्चाहरुलाई फागुन ७ गते, शनिबार, ३० किलोका १७ बोरा चामल, स्टेशनरी र चकलेट आदि सहयोग गरेको छ । हिमालय एअरलाईन्सका अधिकारीहरु र प्रयास नेपाल संगठनका बालबच्चाहरु बीच शनिबारको...
फागुन ११ देखि भृकुटीमण्डमा छालाजुत्ता मेला हुने
काठमाण्डौ । ‘कला र कौशल हाम्रो, नेपाली ब्राण्ड नै राम्रो’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी फागुन ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म नेपाल छालाजुत्ता उत्पादक संघको आयोजनामा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी स्थलमा छैठौं बृहत राष्ट्रिय छालाजुत्ता तथा वस्तु प्रर्दशनी मेला सञ्चालन हुने भएको छ । नेपाली साना घरेलु तथा लद्यु उद्योेगहरुलाई बैज्ञानिक...